မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ “၃ နှစ်၊ ၃ လ၊ ၃ ရက် ဂူအောင်းတရားကျင့်ရန်အတွက်” ဂူထဲမ၀င်ခင် မိန့်ကြားချက်များ - CeleLove
May 2, 2019 Cele Love ဘာသာရေး 0
(၁၇-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ညဦးပိုင်းအချိန် မိုင်းဖုန်းကျောင်းဗောဓိညောင်ပင်ရင်း၌မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမှအဓိဌာန်ဂူမဝင်ခင်ဟောကြားသည့်တရားတော်အားဘာသာပြန်ဆို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….. ။
အေးချမ်းတဲ့နေ့ရက်ကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်အခါသမယဆရာဒကာတွေ လာတွေ့ဆုံကြတယ်၊ သာသနာနှစ် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာ ၂၅၆၃ နှစ်ထဲမှာ (၆)လ(ရှမ်း လ) လဆန်း(၁၃) (၁၉) ရက်ဆို လပြည့်တော့မယ်၊ ဒီနေ့ ဒီရက် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဦးဉာဏသံဝရမနေ့ကညကမိုင်းဖုန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်၊သာသနာသွားပြုတယ် မိုင်းဟဲ့ မိုင်းဖန်က ဂူမှာ နှစ်သစ်သွားကြိုလာတယ် ကောင်းမြတ်တဲ့ အလုပ်ကို သွားလုပ်တယ်၊ နေရာတိုင်း မြို့တိုင်းမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု သွားလုပ်လာတယ်၊မိုင်းတိမိုင်းယန်း မိုင်းစဟဲ မှာ ထီးတော် သွားတင်လာတယ်၊ဝမ်ပန်နောင်ရွာမှာ ဌာပနာ သွားထည့်ပြီး ရေစက်ချလာတယ်၊
ပန်ဆန်း ဝ ဆွေမျိုးတွေလည်း ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြတယ်၊ဝတွေကော ရှမ်းတွေကောအလှူလုပ်ကြတယ်၊ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းရေစက်ချကြတယ်၊ဆက်ပြီးမိုင်းဟဲ့မိုင်းဖန်ဂူကို ဆက်ကြွတယ်၊တညလုံးမိုင်းယောင်းကိုခရီးနှင်လာတယ်၊မိုင်းကိုးက ဒကာကြီးလည်း မိုင်းယု မိုင်းယောင်းအထိ လာပင့်တယ်၊ ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဝင်ကန်တော့ပြီးတညလုံးခရီးဆက်လာခဲ့တယ်၊သာသနာအလုပ်ကအရမ်းများတယ်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး၊အလုပ်တွေအားလုံးသိမ်းပြီးရင်တော့ နားတော့မယ်၊ ပြီးရင် အတိတ် နိမိတ် ရှိထားတဲ့အတိုင်း အဓိဌာန်ဝင်မယ်၊မနက်ဖြန်နေ့ပိုင်း တနာရီ နှစ်နာရီဆိုရင် မိုင်းကြတ်ဂူကိုခရီးဆက်တော့မယ်၊မိုင်းဖုန်းကိုထပ်မကြွလာတော့ဘူး၊သုံးနှစ်သုံးလဂူထဲမှာသေရင်လည်း မပြောနိုင်တော့ဘူး၊ မလာတော့ဘူး၊
ကုသိုလ်ကံ ပါရမီရှိရင်နင်တို့မျက်နှာကိုမြင်ရအုံးမယ် ဂူထဲမှာ သေရင်တော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး၊အဲ့မှာသေရင်လည်း အဲ့မှာ ဌာပနာလိုက်တော့၊ လူတွေရဲ့ သင်္ခါရ တရားက ဘယ်လိုမှ မတည်မြဲ မခိုင်မြဲဘူး၊ ဆရာဆမ်ရဲ့ အမျိုးသမီးပဲ ကြည့်လေ အသက် (၅၈/၅၉) ပဲရှိသေးတာ သေသွားတာပဲ၊ ဟိုတနေ့ကလည်းကျောက်အရားရဲ့ အကိုလည်း သေသွားတာပဲ၊ အဲ့ဒါလည်းရေစက်ချပေးလိုက်တယ်၊ ခံစားရတယ်ဆိုလဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး၊
အိုက်အရားလို များများရေစက်ချပေး၊သေသွားလည်း မေ့ဖျောက်လို့ မရဘူး၊ သေသွားတဲ့ကျိုင်းနွံ(အားဖါ)လည်း ရေစက် ချပေးရတာပဲ၊ တာချီလိတ်ကရွှေဦးထုပ်ဆောင်းတဲ့စိုင်းရှန်လည်းနီပေါထိုင်ဝမ်ကြွတဲ့အချိန်သေသွားတာပဲ၊ရွှေဦးထုပ်ဆောင်းပြီး မသေနိုင်ဘူး ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး၊လူတွေကမကောင်းမှု လုပ်ရင် မြန်မြန် သေနိုင်တာပဲ၊ လူတွေက သတိတရား သီလတရား ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်၊ ငါက နင်တို့ကို တကယ်ချစ်တာ တကယ် သနားတာ၊ လူတိုင်း လူတိုင်း ရှမ်း မပြောဘူး ဗမာ မပြောဘူး လူကြီး လူငယ် မပြောဘူး ဘာသာ မပြောဘူး အားလုံးက ငါရဲ့ ဆွေမျိုး သားချင်းတွေပဲ၊
ဒီနေ့လည်း နောက်ဆုံး စကားတွေ မှာကြားမယ်၊ ကုသိုလ် ဘုန်းကံ ရှိသေးရင်တော့ ပြန်ပြီးတွေ့ဆုံကြရမယ်၊နင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဂရုဏာကြီးကြီးမားမားကိုတောင်းခံတယ်၊နင်တို့ကိုလည်းကြီးကြီးမားမားတောင်းပန်တယ်၊နင်တို့ငါ့ကိုမတောင်းပန်လည်းရတယ်ငါကနင်တို့ကိုတောင်းပန်မှာပဲ၊နင်တို့အပေါ်ပြောမှားဆိုမှား ဝေယျာဝစ္စလုပ်တာတို့အမျိုးမျိုးလုပ်ပေးတာတို့ ကာယကံ (၃)ပါး ဝစီကံ (၄)ပါး မနောကံ (၃)ပါး ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် တဦးနဲ့ တဦး ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ၊ ငါလည်း သားတွေ သမီးတွေကို ဘယဒါနအားလုံးခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်၊အကြီးအကဲတွေကအစ အကုန်လုံး ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်၊
အခုအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက် အာဃာသ မထားဖို့ အပြစ်အနာတွေမရှိဖို့၊အရှေ့မှာလည်း အာဃာသ မထားဖို့ အနောက်မှာလည်းအငြိုးအတေးတွေ မထားဖို့ တယောက်နဲ့ တယောက်အမုန်းတရားမထားဖို့၊ လူတွေကအတွင်းစိတ်မှာမကျေနပ်စိတ်အမုန်းတရားတွေထားတတ်ကြတယ်၊တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ် မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာထားရမယ်သနားကြင်နာမှု ထားရမယ်၊ ဒီလောက ကမ္ဘာမှာ ပိုပို ပူလောင် လာတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာ ပူလောင်လာတယ် ဘယ်လိုမှနေလို့မကောင်းတော့ဘူး၊ဒီလူ့လောကကြီးမှာအတွင်းလည်းပူ အပြင်လည်းပူ နေလို့ မကောင်းတော့ဘူး၊
ခန္ဓာကိုယ် ပူလောင်ရုံတင်မကဘူး စိတ်ပါ ပူလောင်တယ်အသက်ရှုရခက်တယ်၊တိုင်းပြည်မှာလည်းနေရခက်တယ်၊လူတွေကတောတောင်တွေလည်းမီးရှို့ကြတယ်အသက်ရှုလည်းကြပ်မျက်လုံးတွေလည်းစပ်ကုန်ပြီ၊ အသက်ရှုလို့လည်း မရဘူး၊ဒီကမ္ဘာလောကမှာမိုးတွေလည်း မရွာဘူး ဒီနှစ်သစ်မှာ အရမ်းထူးဆန်းတယ်၊ အရမ်း ပူလောင်တယ် တကယ် တကယ် ပူလောင်တာ၊ သီလတရား မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်က ပိုပို ဆိုးတယ် ပိုပြီး စိတ်ပင်ပန်းဖို့ ကောင်းတယ်၊ ငါတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ မကုန်သေးတာတောင်ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ သာသနာကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း၊ရင်လေးဖို့ ကောင်းတယ်၊
လောကကြီးက မှောင်နေပြီမျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်တာတောင် အကိုမောင်နှမလည်း မမြင်ရကိုယ့်လက်ကိုလည်းမမြင်ရသလို ဖြစ်နေပြီး၊ အချို့က အေးချမ်းတဲ့နေရာသွားကြပြီငါပဲ အပြီး မိုက်မဲပြီး နေတာ ၊ထုံအတဲ့သူ ပြောရခက်တဲ့သူ အနေလို့ ပစ္စည်းအလေးကို ထမ်းနေရတယ်၊ စိတ်ဒုက္ခကြီးစွာ ဖြစ်ရတယ်၊ ဒီခန္ဓာကြီးကို ထမ်းနေရတယ်၊ မွေးရတယ် အို ရတယ် နာရတယ် သေရတယ် ဒီလောကထဲမှာ နေနေရတယ် ဘယ်မှ မသွားနိုင်ဘူး၊ တက်တက် ဆင်းဆင်း ဒီမိုင်းဖုန်းထဲမှာပဲ နေနေရတယ် ဘယ်မှမသွားရဘူး၊တာချီလိတ်မှာပဲ လည်ပတ်နေတယ် နိဗ္ဗာန်က ဝေးနေပြီ၊ ကောင်းတာမလုပ် မြတ်တာ မလုပ်ပဲ ပါးစပ်က ဆုတောင်းနေရုံနဲ့ မရောက်နိုင်ဘူး၊
စိတ်ကောင်း စေတနာ ထားဖို့ စိတ်ကို အေးအေး ချမ်းချမ်း ထားဖို့ စေတနာ သဒ္ဒါ တရားတွေကို ဖြူဖြူစင်စင် လှလှပပ ထားဖို့ ၊ ငါတို့ လာဆုံတွေ့ပြီး မြတ်တဲ့ရတနာ ဘုရားမြတ် တရားမြတ် သံဃာမြတ် မိဘမြတ် ဆရာသမားမြတ် မယူတတ်ရင် မမြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ရင် လူလည်းမုန်း နတ်လည်းမုန်း ဖြစ်နေမှာပဲ၊ စေတနာ သဒ္ဒါ တရားကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ထားကြ၊ ငရဲကြီးမယ့် အကုသိုလ် အလုပ် ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ တွေကို ရှောင်ရှားကြ၊ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေဆို မလုပ်သင့်ဘူး၊ အားလုံး ကောင်းတဲ့ အလုပ် မြတ်တဲ့ အလုပ် ဒါန အလုပ် သီလ အလုပ် ဘာဝနာ အလုပ် သမထ ကမဋ္ဌာန်း ဝိပဿနာဉာဏ် ရုပ် နာမ် ခန္ဓာကို စောင့်ကြည့်၊
အာယတနဓါတ် ပဋိစ္စသမုပ္ပ ဓမ္မ တရား မြတ်စွာဘုရား သွန်သင် ဆုံးမထားတာတွေကို မမေ့မလျှော့ အမြဲတမ်း မသေမချင်း မှတ်ထားကြ၊ မသေမချင်း အမြဲလုပ်၊ သေရင် တကယ်သေတာ ခဏမသေဘူး အရင်သေသွားခဲ့တဲ့သူတွေလိုပဲ ကိုယ်လည်း သူများနည်းတူ သေရမှာ၊
ငါ့ကိုပဲကြည့် ဒီဆရာတော် အိုကိုပဲကြည့် ရှေ့နောက် မေ့နေပြီ ဆရာသမားတွေကိုလည်း ရှေ့နောက် စဉ်းစားရင် အကုန် မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး ရှေ့နောက် အကုန်မေ့ပြီ ၄၀ ရှေ့ကို မေ့တယ် ၅၀ နောက်ကို မေ့တယ်၊ အိုလာရင် တုန်တုန် လူပ်လူပ်နဲ့ ထမင်းစားရင်လည်း နှာခေါင်းပေါက်ထဲကို ထိုးထည့်တယ်၊ ၈၀ ရောက်လာရင် မြေကြီးထဲ မြုပ်ရင်မြုပ် မမြုပ်ရင် မီးရှို့ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်၊ ဘာမှမထူးဘူး သင်္ခါရတရားဆိုတာ မတည်မြဲဘူး လဲလို့ရရင် သူက တည်မြဲ နေမှာပေါ့၊ သူက အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ အမြဲတမ်းပြနေတာ၊ တရားက ပြနေတာ နေ့ကော ညကော ခဏနေ သေးပေါက်ချင်တယ် ခဏနေ ချီးပါချင်တယ် ခဏနေ စားချင်တယ် ဟိုနား နာလိုက် ဒီနားစပ်လိုက် ဟိုနားအောင့်လိုက် ခဏနေ ခေါင်းကိုက်လိုက် မျက်စိနာလိုက် သွားကိုက်လိုက် ရောဂါတွေက တမျိုးပြီး တမျိုး ဖြစ်နေတယ်၊
သူကရောဂါမဟုတ်ဘူး ရောလာတာ ကိုယ့်ဆီ နီးနီးလာလို့ ရောလာလို့ ပြောတာ၊ မီးလောင်သလိုမျိုးပဲ တဖြည်းဖြည်း အနားကို လောင်မြိုက်လာတာ၊ အစတုန်းက ကစားသလိုပဲ ကြာလာတော့ နီးနီးလာပြီး တကယ် ဖြစ်လာတာ၊ သူများသေတာမြင်ရင်လည်း ကိုယ်လည်း သေရမှာ ဟန်ဆောင်ပြီး သေရတာ မဟုတ်ဘူး တကယ်သေရမှာ၊ သေသွားရင် ရွှေ ငွေ ဥစ္စာ ဘာတခုမှ လိုက်မသွားဘူး နောက်မှာအကုန် ပစ်ထားခဲ့ရမှာ၊ သားတော် ကျိုင်းနွံ(အားဖါ)ပဲ ကြည့်လိုက် သေသွားတော့ ရွှေ ငွေ ဥစ္စာတွေ နောက်မှာ အကုန် ထားခဲ့ရတာ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ပဲ ကိုယ်နဲ့ အတူ ပါသွားတာ၊ ကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို သတိရ ဇွဲ ဝီရိယနဲ့ ကြိုးစားပြီးလုပ် သေမယ့်ရက်ဆိုတာ ကိုယ် မသိနိုင်ဘူး သတ္တဝါ အားလုံးက မွေးနေ့ရှိရင် သေနေ့ဆိုတာ ရှိတယ် နေထွက်ချိန်ရှိရင် နေဝင်ချိန် ရှိမှာပဲ၊
သတိတရားမရှိရင် အလကား ပစ်လိုက်သလိုပဲ၊ ထမင်းစားရင်လည်း ထမင်းက အလကား ဖြစ်သွားတယ် ဟင်းစားရင်လည်း ဟင်းက အလကား ဖြစ်သွားတယ်၊ သေရည်သောက် ကွမ်းဝါး ဆေးရှု အလပ သလပ ပြောဆို အလကားပဲ၊ ဆူဆူညံညံ ပျော်ပါးနေရင် အလကား အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူး၊ ဘယ်နေ့ သေမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး၊ လောကမှာ ပျော်တယ်ဆိုတာ ခဏတဖြုတ်ပဲ၊ ဘာမှ မထူးဘူး စေတနာ ကောင်းကောင်းထား၊ မျက်လွှာချ မျက်နှာငုံ့ပြီး ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ကို သူသူ ငါငါ လုပ်၊ ဒါန သီလ ဘာဝနာ သမထ ကမ္မဌာန်း ဝိပဿနာ ရုပ် နာမ် ခန္ဓာ အာယတနဓါတ် ပဋိစ္စ သမုပ္ပတရား အရိယ သစ္စာ လေးပါး အပေါ်မှာ တစိုက် မတ်မတ်ကြည့်၊ သစ္စာလေးပါးကို မတွေ့ပဲ သေသွားရင် အလကား ရှုံးမယ်၊
နေရတာလည်း ဘာမှ မကောင်းဘူး လူလာဖြစ်ရတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်၊ ရင်လေးစရာလည်း ကောင်းတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ပါ ၊ မအောင်ခင်မှာ မြွေလေးကောင် ရန်မဖြစ်ခင် မြေ ရေ လေ မီး မပျက်ဆီးခင် ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်ကြ၊ ဒါန သီလ ဘာဝနာ မြတ်စွာဘုရား သွန်သင်ဆုံးမတဲ့ အတိုင်း မလွန်ဆန်နဲ့ မမေ့ မလျှော့ပဲ ဝိုင်းဝန်းပြီး ကျင့်ကြံ ပွါးများကြ၊
ဗုဒ္ဓနုဿတိ ဓမ္မာနုဿတိ သံဃာနုဿတိ စာဂနုဿတိ ဒေဝတာနုဿတိ မရဏနုဿတိ သေရမယ်ဆိုတာ သတိရှိကြ၊ လူတွေက သေရမယ်လို့ သတိရှိထားရင် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ပျောက်ကုန်တယ်၊ သေရမယ်လို့ သတိမရှိရင် မာန်မာနက စိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေမယ် မကောင်းတဲ့စိတ် လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန်မာန စိတ်တွေ အဝိဇ္ဇတဏှာစိတ်တွေ ပိုပို များလာမယ် ဒုက္ခတွေလည်း ပိုများလာမယ်၊ သေဖို့ သတိရရင် တနေ့ ငါလည်း သေရမယ် တနေ့ သူများ မွေးသလို ငါလည်း မွေးရမယ် သူများ အိုသလို ငါလည်း အိုရမယ် သူများနာရင် ငါလည်း နာရမယ် သူများသေတာမြင်ရင် တနေ့ ငါလည်း သေရမယ်ဆိုတာ သိလာမယ်၊
မသေခင်မှာ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ် သူများ အလုပ်ပြီးတာ မပြီးတာ စိတ်မဝင်စားနဲ့ ကိုယ့်အလုပ် ပြီးမပြီးပဲကြည့်၊ ငါအားကိုးရှိပြီးလား နေရာကောင်း ရှိပြီးလား ငါသေသွားရင် ကောင်းတဲ့ဖက်ကို သွားမှာလား ဆိုးတဲ့ဖက်ကို သွားမှာလား မျက်စိမှိတ်ပြီး တစိုက် မတ်မတ်ကြည့်၊ ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့ဖက်ကို သွားရမယ် မကောင်းတာ လုပ်ရင်လည်း မကောင်းတဲ့ဖက်ကို သွားရမှာ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို မကူညီနိုင်ဘူး၊ မိဘ ဆွေမျိုး သားချင်းတွေဆိုတာ သင်္ချိုင်းထိပဲ ပို့ပေးနိုင်တာ နှစ်ရက်သုံးရက်ဆို မေ့ပျောက်ပြီ၊ မျက်ရည်တွေပဲ သုပ်ပြီး ပြီးသွားပြီ ကိုယ်ပဲ သင်္ချိုင်းမှာ ပုပ်သိုးပြီး ကျန်ခဲ့ပြီ၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ မှီခိုရာဖြစ်မှာ၊
အဲ့ဒါကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်ကာလမှာပဲ လုယက်ပြီး အလှူအတန်း ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ် သာသနာအလုပ်တွေ ကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ တည်ဆောက်သွား၊ အခု မိုင်းဖုန်းဆရာတော် အစပျိုး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သာသနာလုပ်ငန်းတွေ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ ပဋိယတ္တိ သာသနာ ပဋိပတ္တိသာသနာ အလုပ်တွေကို မမေ့မပျောက်ပဲ စုပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားကြပါ၊ ငါရှိနေသည်ဖြစ်စေ သေသွားသည် ဖြစ်စေ ငါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သာသနာ ပါရမီတွေ အဲ့ဒါတွေက မသေနိုင် မပျောက်သွားနိုင်ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ ပါရမီ ကျောင်းဆောင်တွေ စေတီတွေ အရာအားလုံးတွေက နင်တို့မျက်စိအောက်မှာ မြင်တွေ့နေသလိုပဲ စုပေါင်းပြီး ဆက်လက်တည်ဆောက် ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်သွား ငါ့ဟာ တခုမှ မဟုတ်ဘူး၊
ဒီကျောင်း ဒီနေရာတွေကို လာမလုနဲ့၊ နင်တို့ လာလုလည်း တနေ့သေသွားကြရမှာပဲ၊ ကျောင်းထဲမှာ မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်း လာလုယူရင်လည်း ဆရာတော်က ဘာမှ ဧရိယာ သတ်မှတ်ထားတာ မရှိဘူး ဘယ်သူမဆို လိုချင်တဲ့ နေရာ ယူကြ သေသွားရင် ယူလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဆရာတော်ကတော့ ဘာမှ မပြောနိုင်ဘူး ဘယ်သူမဆို လိုချင်တဲ့ နေရာ လာယူသွားကြတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စည်းကမ်း ဥပဒေက အရင်အတိုင်း မဟုတ်ဘူး သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အပ်ပေးလိုက်ပြီ ဆရာတော်နဲ့ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ဘူး၊ နင်တို့ သူများပစ္စည်း သွားထိပြီး အဖမ်းခံရရင်လည်း ဆရာတော် မသိတော့ဘူး သာသနာလုပ်ငန်း ကျောင်းကန် လုပ်ငန်းတွေ အကုန်လုံးကို အပ်ပေးလိုက်ပြီး ဆရာတော်နဲ့ ဘာမှ မသက်ဆိုင်ဘူး လူကြီးတွေကို ဒီနေ့ အပ်ပေးလိုက်ပြီ၊
ဒီနေရာကို ရောက်လာတာ ဝမ်းမြောက်တယ် လာရောက်သူတွေကို ပြန်ပေးစရာမရှိဘူး တရားပဲ ပေးစရာရှိတယ်၊ ဓမ္မတရားက ရွှေ ငွေ ရတနာထက်ပိုတယ်၊ ဓမ္မတရားကို ရင်ထဲ နက်နက် နဲနဲမှာ ဌာပနာထားပြီး ကျင့်ကြံ ပွါးများကြ၊ မြတ်စွာဘုရားကို ရှစ်ခိုးပူဇော်တာ သူဓလေ့ ထုံးစံအတိုင်း ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြ မမေ့နဲ့ ကိုယ့်ဓလေ့တွေကိုလည်း လေ့လာသင်ယူကြ၊ ဗမာစကားလည်း တတ်ရမယ် ငါကတော့ နောက်ကျသွားပြီ ငါမတတ်ခဲ့လို့ ပညာ မတတ်ခဲ့ဘူး၊ ပညာမရှိရင် သူများကို ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ ငေးကြည့်နေရမယ်၊ တချို့ဆို မြို့ကြီးဆီသွားပြီး ရွှေဒေါင်းမယ်တော်ကို ရှစ်ခိုးကြတယ် တမြို့လုံးတောင် ရှစ်ခိုးကြတယ်၊
အဲ့လိုပဲ မိန်းမတွေလည်း သီလတရားဓမ္မတွေရှိရင် မယ်တော် အရာမှာ ထားပြီး ရှစ်ခိုးတယ်၊ သီလတရားမရှိရင် လူအိုတွေကိုလည်း မရှစ်ခိုးသင့်ဘူး ဘုန်းကြီးတွေလည်း မရှစ်ခိုးသင့်ဘူး၊ သူများအပေါ် မေတ္တာမရှိ လောဘ ဒေါသ မောဟစိတ် ဖြစ်ပြီး သူများနဲ့ ရန်ဖြစ်နေရင် အသက်ကြီးပြီး အလကားပဲ၊ သေသွားရင်လည်း အလကားပဲ၊ လူက တရက်ပဲ အသက်ရှင်ပြီး ကောင်းတာလုပ်ရင် တကယ် မြတ်တယ် ….. ။
အဲ့ဒါကြောင့် များများပြောရင်လည်း ရင်ထဲမှာ ကြပ်တယ် နည်းနည်းပြောရင်လည်း မထိရောက်ပြန်ဘူး၊ အများကြီးလည်း ဟောလာပြီ ရေတွက်လို့တောင် မရဘူး နေရာတိုင်း မြို့တိုင်း စုံနေပြီ အခုချိန်က သူ့အချိန်ကျလာပြီ နားရတော့မယ်၊ အသက်ကလည်း (၅၅)(၅၆)ရှိလာပြီ နှစ်သစ်ကျော်သွားရင် (၅၇)ဖြစ်ပြီ တဖြည်းဖြည်း (၆၀) နားကပ်လာပြီ၊ အခုဂူဝင်ပြီး ထွက်လာရင် မျက်နှာလာကြည့်ပြီးတော့ ဟိမဝန္တာမှာ ထပ်ဝင်အုံးမယ်၊ ဘူတန်မှာ သွားသေမလား မပြောနိုင်ဘူး၊ ဆရာတော် သင်္ဂြိုလ်မယ့် ကျောက်အိုးလည်း ဒီမှာ ရောက်နေပြီ၊ မိုင်းဖုန်းမှာသေရင် ဒီမှာ ဌာပနာလိုက် ဘူတန်မှာ သေရင်လည်း သူတို့ပြုစု စောင့်ရှောက်သွားလိမ့်မယ်၊ ဘာမှစိတ်မပူတော့ဘူး ဒီအပုပ်ကောင်ကြီးကို အားလုံးကို စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းပြီးပြီ၊
အဲ့ဒါကြောင့် ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဓမ္မတရား ဒေသနာတော်တွေကို အကုန်လုံးကို သံဃာတော်တွေကို အပ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီ၊ တပည့်တပန်းတွေလည်း ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းကြ၊ နောင်မှာ ဘယ်လိုမျိုး တိုးတက်ဖွံဖြိုး အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ တပည့်တပန်းတွေက ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း တည်ထောင်တဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်၊ အချင်းချင်း ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ခင်စည်းလုံးကြ၊ တယောက်နဲ့ တယောက်အပေါ် ခိုက်ရန် မဖြစ်ပွားပဲ မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ မေတ္တာများ ထားရှိကြပါ ….. ။
သနားကြင်နာကြပါ အကောင်းမြင်စိတ် ထားကြပါ၊ တယောက်နဲ့ တယောက် မကောင်းပြောနေရင် ပေါင်းသင်းလို့ မရဘူး လင်မယား မောင်နှမ ဆရာတပည့်တွေတောင် ပေါင်းသင်းဖို့ မလွယ်ဘူး၊ လောကထဲမှာ နေရင် တဦးနဲ့ တဦး မှီခို နေရတာ တယောက်တည်း နေလို့ မရဘူး အပြန်အလှန် မှီခိုပြီး နေထိုင်ကြရတယ် …. ။
အညမည ပစ္စယော အပြန်အလှန် စေတနာထားကြပါ၊ ကိုယ်သူများကိုဆဲမယ် ရိုက်မယ် သတ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ကို သူများကလည်း ဆဲမယ် ရိုက်မယ် သတ်မှာပဲ လောကသဘာဝ သဘောတရားတွေပဲ၊ ဓမ္မတရားနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို သွန်သင်ရမယ်၊ ဓမ္မတရားက အဝေးကြီး ကြည့်စရာ မလိုဘူး သစ်ပင် ပန်းမန် အကောင် တိရိစ္ဆာန်တွေ အကုန်လုံးက တရားပြနေကြတာပဲ အဲ့ဒါတွေက ကိုယ့်စိတ်ကို ဆုံးမတဲ့ တရားတွေပဲ ကိုယ်က မကြည့်လို့ အ ပြီး မသိကြတာ၊ မွေးတာ အိုတာ နာတာ သေတာ နေ့တိုင်း သင်ပြနေတာ၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သင်္ချိုင်းကို မပြီး ဝင်သွားတာလည်း မမှတ်ထားကြဘူး ကိုယ်တိုင် သေမှ သိကြမှာ သေကြည့်လိုက်ပါ ၊
သူများသေတာကိုမြင်ပြီး တခစ်ခစ်နဲ့ ရီနေကြတာ ကိုယ်တိုင်သေမှ သိမယ်၊ ကုသိုလ် ပါရမီ ဓမ္မတရားအလုပ်က လောကသစ္စာတရားတွေက ကိုယ့်ကို သင်ပြနေတာ၊ ကမ္ဘာလောကမှာ သဲပွင့် ကျောက်ပွင့် ပုရွက် ခြ ကောင် ပုတုံး တွေကိုကြည့် သူတို့တောင် အိမ်တွေ တည်ဆောက်ကြတယ် ပန်းပွင့်တွေက ဝတ်ရည်တွေယူလာပြီး သူတို့ သားသမီးတွေကို လာကျွေးနိုင်သေးတာ လူတွေမှာ သတိတရားရှိရင် အကုန်လုံးက ကိုယ့်စိတ်ကို သင်ပြတဲ့ တရားတွေကြီးပဲ၊ မပျင်းနဲ့ အရှုံးမပေးနဲ့ အလဟဿ မနေနဲ့ အချိန်တွေ နေ့ရက်တွေကို မရှုံးစေနဲ့၊ အလကားနေရင် ဒီဘဝမှာ မွေးလာပြီး လူလာဖြစ်ရတာ ဘာမှ အကျိုး မရှိဘူး၊
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်လည်း များများပြောရင် ရင်ထဲမှာ ကြပ်နေတယ် နည်းနည်းပြောရင်လည်း တန်ဖိုးမထားဘူး ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လုံလောက်ပြီထင်တယ်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ နေ့ရက်မှာ လာတွေ့ဆုံကြတာ နှစ်ဟောင်းလည်း ကုန်သွားပြီ မကောင်းတဲ့အရာတွေ နှစ်ဟောင်းမှာ ကုန်သွားပြီ အကုသိုလ် မကောင်းတဲ့အရာတွေ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ အကုန်လုံး ဆေးကြောပစ်လိုက်ပါ ပြန်ပြီးတော့ သန့်ရှင်းအောင် ပြုပြင် ဆေးကြော ခန္ဓာနဲ့ စိတ်ကိုလည်း ပြုပြင် ဆေးကြော နှစ်သစ်မှာ ကောင်းမြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး စိတ်သစ် ကိုယ်သစ် ပြုပြင်ကြ၊ လင်မယား မောင်နှမတွေ ရန်မဖြစ်ကြနဲ့ ဆူဆူညံညံ မလုပ်ကြနဲ့ အချင်းချင်း ရန်မဖြစ်ကြနဲ့ အငြင်းအခုံ မလုပ်နဲ့ မသတ်ဖြတ်ကြနဲ့ ၊
သူများပြောတယ် မဟုတ်လား “ပါနာတိပါနာ ဝေရာမဏိ” ဆိုပေမယ့် “ပါနာတိပါတိုင်”(ရှမ်းလို တိုင်ဆိုတာ သေတာ) ဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း သေအောင် သတ်နေကြတယ်၊ “အာမဘန္တေ” မဟုတ်ဘဲ “အာမဘန်တိုင်” ဖြစ်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် သေအောင် လုပ်နေကြတယ်၊ ကျောက်ပန်ဖ လာဆုံးမတယ် ကျောက်ရွက်ဆစ် ပုတီးယူသွားတယ် နင်တို့မဆူနဲ့ ဆူရင် ရှမ်းပြည်မှာ မနေတော့ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်၊ ရှမ်းတွေ ဗမာတွေကို ချစ်လို့ ပြန်လာတာ နင်တို့ကို သနားလို့ ပဌာန်းဆက်တွေများလို့ ၊ ဘူတန်ဘုရင်က ပင့်ထားပြီးပြီ မြန်မာပြည်ကို လုံးဝမလာလည်းရတယ် …. ။
ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေ ဒီမှာရှိလို့ မေတ္တာပြန်လာပေးရတာ၊ မိုင်းကြပ်ဂူမှာ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်မယ်လို့ ပြောထားတာလည်းရှိလို့ ရှင်ရင်လည်း မိုင်းကြပ်ဂူမှာပဲ နေမယ် သေရင်လည်း မိုင်းကြပ်ဂူမှာပဲ သေမယ် သုံးနှစ်သုံးလ ဘယ်မှ မသွားတော့ဘူး လူတွေ နတ်တွေ သတ္တဝါတွေကို မေတ္တာ ပို့သတော့မယ်၊ မနက်ဖြန်သွားပြီး မင်္ဂလာ ယူလိုက်အုံးမယ် (၂၇)ရက်နေ့ကတော့ ဆရာတော်ကို ပို့ဆောင်ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင် အချိန်ပဲ၊ (၁၉)ရက်နေ့က ကန်တော့ပွဲကြီး ကန်တော့ပြီးတော့ ဟိုရန်းစေတီမှာ ထီးတင်မယ် ….. ။ပြီးရင် ကျိုင်းတောင်း ရေတံခွန်၊ ပြီးရင် နန့်ရီဆန်တော်မှာ ရေစက်ချ ထီးတင် ပြီးတော့ နားကောင်းမှုမှာ ရေစက်ချ မိုင်းတုံမှာ ဌာပနာ၊ မိုင်းလီ မိုင်းကော့ မိုင်းလုံး မှာ ရေစက်ချ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ကန်တော့ပြီး (၂၆)ရက် မိုင်းကြပ်ဂူကို ပြန်မယ် မိုင်းဖုန်းကို မဝင်တော့ဘူး (၂၇)မှာ ပြီးဆုံးမယ်၊ လာမရှုပ်နဲ့တော့ အနှောင့်အယှက် လာမပေးကြနဲ့တော့ ဘယ်သူသေသေ ရှင်ရှင် ဘာစာမှ မရေးနဲ့ ဘာသတင်းမှ လာမပေးနဲ့ တရားနဲ့ပဲ အေးချမ်းစွား နေတော့မယ် ….. ။
အကြောင်းကိစ္စရှိရင် စာရေးပြီး ပါးလိုက်မယ် လူတိုင်းကို မေတ္တာပို့သပေးမယ် ဒီလောက်ပဲ မှာထားမယ်၊နေကောင်း ကျန်းမာ ဥစ္စာပေါများ သီလတရားရှိပြီး နိဗ္ဗာန်ကို အမြန်ရောက်ရှိကြပါစေ၊ နိဗ္ဗာန်မရောက်မှီ စပ်ကြား သံသရာမှာ ကျင်လည်ရမည် ဆိုလည်း လူဖြစ်ရင်လည်း လူကောင်း နတ်ဖြစ်ရင်လည်း နတ်မြတ် နတ်ကောင်း အာယုဝန သုခဗလ ပတ္တိဒါန အကျိုးငါးပါး ပြည့်ဝ ပြည့်စုံ လောကီ လောကုတ္တရာ ဥစ္စာ အလုံးစုံပြည့်စုံပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ် ….. ဒါန သီလ ဘာဝနာ ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း ကောင်းမြတ်ပြီး ပါရမီ ဆယ်ပါး မပြည့်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ ဒါန သီလ စာဂ ပညာ ဝီရိယ ဟီရိ သြတ္တပ သန့်ရှင်းဖြူစင်ပြီး ပါရမီဆယ်ပါး ပြည့်စုံပါက မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ရရှိပြီး အေးချမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို လူတိုင်း အယောက်တိုင်း ရရှိနိုင်ကြပါစေ သတည်း …. ။